Gịnị bụ ọnọdụ kacha ọhụrụ na Kabataş Mahmutbey Metro Line project? - RayHaber
[19 / 08 / 2019] 3 ulo oru ulo ohuru maka TCDD	41 Kocaeli
[19 / 08 / 2019] Oge Vangolu Express Flight Times na ụgbọ oloko	06 Ankara
[19 / 08 / 2019] Enigma n'efu na Başkentray	06 Ankara
[19 / 08 / 2019] Ọzụzụ Pụrụ Iche site na EGO ruo ndị ọrụ	06 Ankara
[19 / 08 / 2019] 6 New Bus Line na Denizli	20 Denizli
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulGịnị bụ ọnọdụ kacha ọhụrụ na Kabataş Mahmutbey Metro Line project?
Gịnị bụ ọnọdụ kacha ọhụrụ na Kabataş Mahmutbey Metro Line project?
13 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey 0
Gịnị bụ ọnọdụ kachasị ọhụrụ na kabatas mahmutbey metro line project
Onye isi obodo nke obodo isi obodo Metropolitan Ekrem İmamo visitedlu gara ebe ọrụ ihe owuwu Beşiktaş nke Kabata Mahmutbey metro Line.
Obodo isi obodo Istanbul (IMM) Mayor Ekrem Imamoglu, owuwu ụbọchị nke abụọ nke ememme Kabatas - Mahmutbey Metro, ebe a na-ewu ụlọ ọdụ Besiktas kwuru. Rahmi Asal, Onye isi ụlọ ọrụ ihe ngosi nka ihe ochie nke Istanbul nyere Imamoglu ihe omuma banyere mpaghara ahụ, nke e ji ihe ncheta ndị mere akụkọ ihe mere mee n'oge a na-egwu olulu ahụ. Asal kọọrọ Imamoğlu na mgbe a na-egwu olulu mmiri ahụ, na e nwere ihe osise ndị sitere na oge Ottoman na Byzantine yana ebe ili ozu sitere na Oge Ọla. Asal gosiputara Imamoglu ufodu ihe nlere sitere n’ili ala nke echere na odi ihe dika 5 puku 500 ahoro ma jiri ya dika ihe eji eme ya. Asal, nchedo ngwa ngwa nke ihe ncheta akuko aghaghi ime ka edee site na iziga ha na ebe ngosi ihe mgbe ochie, a gha emegheere ndi mmadu igha uzo uzo metro.
Mamoğlu kwuru, ne Gini di na onwu a na-azọ njem a? Inyela ụbọchị 2020 kachasị ọhụrụ na Jenụwarị, ebe arụmọrụ metro dị na Besiktas nọrọ. ”Ajụjụ a bụ, kazı olulu ndị e mere ebe a dị anyị ezigbo mkpa. N’ihi na enwere ọmụmụ ihe ebe a na-eme ka a mata nnukwu akụkọ gbasara Istanbul. Ọ bụ ihe ịrịba ama na a ga-eji nwayọ ihe ọ bụla anyị na-eme. Ana m achọ ka ihe gaziere ndị nkuzi na ndị ọrụ ibe anyị, ndị na-edozi usoro olulu mmiri a. N’ezie, Istanbul ga-adị n’aka ma a ga-echekwa ụkpụrụ ndị a. Dika ihe omuma ohuru si di, enwere ihe na-egbu oge n'ihi ogwugwu ndi nile gbara gburugburu ulo a, mana Kabataş - Mahmutbey line adighi enye nsogbu. Naanị nkwụsị a ka enwere ike ịrụ ọrụ n'oge. Imeghe nwere ike daa ntakịrị oge. Ozugbo ọdụ anyị na-arụ ọrụ, anyị ga-enwe ike ịnye okirikiri ebe ndị mmadụ nwere ike ịhụ mkpọmkpọ ebe ebe a ka ha na-ada. Ya mere, ọ ga-aghọrọ ọdụ na ebe ngosi nka. ”
Imamoglu kwuru, Bal Anyị ahụla ụzọ mkpọda ụzọ na Balmumcu n'afọ ndị na-adịbeghị anya. O nwere ihe ọ bụla metụtara ya na igwu ala ndị dị n'okpuru ala? ” Nzaghachi Imamoglu maka ajụjụ a bụ, “A naghị egbu oge. Ọ bụrụ n’ịhụ ihe egwu dị otú a, anyị na-enwekwa mmetụta nzere maka ịkpachara anya, ịba ngwa ngwa na ibute ebe ndị ahụ ụzọ. Ekwuputara m na achọrọ m ezigbo akụkọ site n'aka ndị enyi m n'oge ikpeazụ n'ime Septemba. Kachasị arụ ike, anyị ga-anọ n'otu tebụl anyị ga-esonyere ndị mmadụ na-arụ ọrụ ebe a ma ọ bụ ndị ọkachamara n'ọhịa iji mepụta mkpesa ngwa ngwa. Anyị ga-ekpebi maapụ okporo ụzọ iji mee ka ọha na eze mara ma mee ihe ndị achọrọ İmamoğlu kwuru, X mostzọ kachasị sie ike iji ruo Istanbul bụ 3. Airport. Think chere echiche maka ụzọ ụgbọ oloko maka mpaghara ahụ? Onye ọ bụla na-atụ anya ụdị akụkọ ahụ "na ajụjụ ahụ abụghị nke a. Ọzọkwa, okwu a bụ Mecidiyeköy - 3. Ulo elu ugbo elu ugbua bu eriri nke ndi Minista njem n’agha mechiri. Nke a abụghị usoro ịdị mma nke obodo mepere emepe. Yabụ, usoro ndị ọzọ, metro - metrobus, n'ọtụtụ ụzọ ka etolite ọdụ nke ọdụ ahụ. Nke a dị na ebumnuche njem. Ugbu a na-arụ ọrụ n'okpuru njikwa nke Ministry of Transport na-aga n'ihu na-arụ ọrụ n'usoro a. Aga m aga eleta ebe ahụ n’oge na-adịghị anya wee nweta ozi. Ọ ga-eme ka ị mata ozi nke anyị nara. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ndị Ministry of Transport ga-enye ozi dị mkpa ”.
Usoro Konya-Karaman High Speed ​​Train Line 07 / 07 / 2013 Ọnọdụ ikpeazụ n'ime usoro ihe omume Konya-Karaman High Speed ​​Line bụ MP Karaman MP Mevlüt AKGÜN na nkwụsị akụkọ ya; Demiryolu Obi dị nro maka owuwu nke ụgbọ okporo ígwè abụọ na ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị n'etiti Konya na Karaman. Dị ka a maara, 200 ga-aga n'etiti Konya na Karaman na obi dị n'etiti Konya-Karaman na ụgbọ okporo ígwè 40 ga-ebelata na 11.03.2013. Oge nyocha nke obi ebere a na-aga n'ihu. Mgbe nnukwu ọrụ a na ọnụahịa nke 438.143.568,00 TL gachara, awa 2 dị n'etiti Ankara na Karaman ga-adị gburugburu 30 nkeji. Konya-Karaman nwere ahịrị abụọ na Konya
İstanbul BB Beşiktaş - Kabataş Tekstilkent - Mahmutbey Rail System Line Metro line ga-nyere 2 ogbo 28 / 11 / 2012 Emeela ọhụụ ọhụrụ banyere "Beşiktaş - Kabataş - Tekstilkent - Mahmutbey Rail System Line Project" nke nke Istanbul Metropolitan Municipality ga-enweta ego ya. Dị ka ozi natara Investments Magazine; A ga-ahazi ọrụ nkwadebe nkọwa na nrịgo nke 2 metro site na ọkwa nke mmecha. Ndị ọchịchị, ndị na-akpọ Metro line Kabatas - Mecidiyekoy na Mecidiyekoy - A ga-enye usoro agbụ dị iche iche dị na ọkwa abụọ dị iche iche. Maka ozi ndị ọzọ biko pịa: Ebe E Si Nweta Ego: Nkwụnye ego
Beşiktaş - Kabataş Tekstilkent - Agbanyere usoro ntinye okporo ụzọ Method Rail System Line Line Metro na 2 03 / 12 / 2012 Emeela ọhụụ ọhụrụ banyere "Beşiktaş - Kabataş - Tekstilkent - Mahmutbey Rail System Line Project" nke nke Istanbul Metropolitan Municipality ga-enweta ego ya. Dị ka ozi natara Investments Magazine; A ga-ahazi ọrụ nkwadebe nkọwa na nrịgo nke 2 metro site na ọkwa nke mmecha. Ndị ọchịchị, ndị na-akpọ Metro line Kabatas - Mecidiyekoy na Mecidiyekoy - A ga-enye usoro agbụ dị iche iche dị na ọkwa abụọ dị iche iche. A na-atụ anya ọkwa ahụ na November-December. A na-ezube oru ngo ahụ ka ọ na-eri gburugburu 2.1 ijeri TL. N'ihe dị nro nke 25 kilomita ogologo okporo ígwè usoro,
Ọnọdụ ikpeazụ na Ankara-Istanbul High Speed ​​Train Project 04 / 11 / 2011 Speed ​​Train Project, dị n'agbata Ankara-Istanbul akara onwe ha 250 km / h dị ka ọsọ, niile electric, na-agba ama mejupụtara ndị na-ewu nke ọhụrụ abụọ-ọsọ okporo ígwè akara. Taa, akara ugbua dị n'etiti Ankara na Istanbul bụ 576 kilomita, nke niile bụ mgbaàmà na eletriki. Dị ọbụna onwe ha, 250 km / h dị ka ọsọ, sọrọ-akara, ike na mgbaàmà mgbe ẹkụre wuru-Speed ​​Train akara, anya n'etiti abụọ isi obodo, 533 km 'na-na. 10 ọrụ ahụ nwere akụkụ dị iche iche. • Ankara Sincan: 24 Km • • Sincan Ankara-Speed ​​Okporo ígwè Station-Esenkent: 15 Km • Esenkent- Eskisehir: 206 ...
ANKARA - İSTANBUL Ọhụụ nke Ọhụụ Dị Elu nke Ọhụrụ 11 / 01 / 2012 Speed ​​Train Project, dị n'agbata Ankara-Istanbul akara onwe ha 250 km / h dị ka ọsọ, niile electric, na-agba ama mejupụtara ndị na-ewu nke ọhụrụ abụọ-ọsọ okporo ígwè akara. Taa, akara ugbua dị n'etiti Ankara na Istanbul bụ 576 kilomita, nke niile bụ mgbaàmà na eletriki. Dị ọbụna onwe ha, 250 km / h dị ka ọsọ, sọrọ-akara, ike na mgbaàmà mgbe ẹkụre wuru-Speed ​​Train akara, anya n'etiti abụọ isi obodo, 533 km 'na-na. 10 ọrụ ahụ nwere akụkụ dị iche iche. • Ankara Sincan: 24 Km • • Sincan Ankara-Speed ​​Okporo ígwè Station-Esenkent: 15 Km • Esenkent- Eskisehir: 206 ...
Ọnọdụ nke Rize Teleferik Project nke oge a (Foto Foto) 28 / 05 / 2014 Ọnọdụ Kacha ọhụrụ na Rize Ropeway Project Ihe: Ọrụ mmefu na-aga n'ihu maka usoro ihe mgbochi e zubere ka a wuo site na Rize n'ụsọ oké osimiri na Dağbaşı ebe. N'ime oru mmefu, ngụkọta nke 480 m2 mpaghara kwadoro site n'inwe nkwekọrịta na ndị nwere ikike na Paşakuyu Neighborhood. Ya mere, a na-emepụta 30 acres nke ngwongwo 15 acres zuru ezu iji kwụọ ụgwọ. Mayor nke Rize kwuru na oru ngo ahụ ga-enye nnukwu onyinye na njem nke Rize. Dr. Reşat Butcher kwuru na a ga-eme ka azụmahịa ndị ahụ dị mkpa site na imebi ndị nwe. N'ịkọwa na ha chọrọ ịghọta ngwa ngwa ahụ ngwa ngwa, Kasap kwuru, sị, "Dịka data anyị nwere ugbu a, a na-emepela 30 acres nke 15 acres."
TCDD Bursa High Speed ​​Train (YHT) Project 07 / 02 / 2012 TCDD Bursa High Speed ​​Train (YHT) oru ngo ke akpatre ikpe nke Transport, Maritime Affairs na Communications Minister Binali Yildirim, "si Ankara ka Konya, Ankara ka Istanbul si Ankara ka Sivas, Ankara na Bursa, na Seljuk anyị na-aghọta a isi obodo nke Ottoman Alaeze Ukwu na Turkey onye YHT ngo ọzọ ụzọ ka ọ bụla ọzọ, "ka o kwuru. TCDD General Directorate ẹkenịmde ke Bursa High Speed ​​Train (YHT) Project Ministers-ekwu okwu na ndị bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado ememe, Yildirim, Bursa-akpa ogbo nke Bilecik akara na-achọ inwere Bursa-Yenisehir akụkụ ga-aba uru na bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado ememe, na ụzọ ụgbọ okporo ígwè nke Republic of Turkey bụ dị ka ihe dị mkpa dị ka nnwere onwe nke nnwere onwe na-alụ malite na ebe a, Ankara Station kwuru na a na-achịkwa ya. Minista Yıldırım, mgbe a kpọsachara ụgbọ okporo ígwè Republic Atatürk Bakan
Ọnọdụ ugbu a na Trabzon ropeway oru ngo 26 / 01 / 2016 Ropeway oru ngo na Trabzon ikpeazụ ikpe: Trabzon Governor Abdil Jalil Self, Çaykara'da na obi Uzungöl'de na-azụ ahịa na-akọrọ ọhụrụ ndị na na cable ụgbọ ala oru ngo Sukru Fettahoğlu igbu. Gọvanọ Öz, kọwapụtara ihe kpatara mgbatị ahụ. Self Governor akọwa ihe mere ndị prolongation "Na mbụ, e nwere a mgbanwe na bidder bụ banyere ruru n'ihi na a afọ na-egbu oge nke iri, e gafere a afọ-ọgwụgwụ na-eme ka mkpebi nke onye ọzọ e weere mgbe zoning plan. E nwere ihe mgbochi ole na ole n'usoro mmepe. Onye na - eme ndokwa ka Ministri nke gburugburu ebe obibi na obodo mepere emepe. Enwere ihe iji gafee National Parks. Ụbọchị edere na nkọwa dị nro İhale
Ọnọdụ nke ugbu a na Bandayrma-Bursa-Ayazma-Osmaneli High Speed ​​Train Project 16 / 09 / 2012 Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Ngwá Ngwá Dị Elu Ọ na-eme iji kwado njem dị n'etiti obodo ukwu ndị dị ka Ankara, Izmir, Istanbul na Bursa na iji belata oge njem. Na mmezu nke oru ngo ahụ, a ga-ewepụ nsogbu ndị na-arụ ọrụ na njedebe a, a ga-ewepụkwa njikọ dị n'etiti Asia na Europe n'otu ụkpụrụ. Ebumnuche ọzọ bụ ijide n'aka na ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ na-enye nchebe dị mma ma dịkwuo mfe site n'ibelata nsogbu ndị dị ka ihe mberede okporo ụzọ na mmetọ ikuku nke ọgba aghara okporo ụzọ dị na mpaghara kpatara. Obi usoro Bursa na Bandırma Port of Bandirma mba anyị iji jikọọ ụgbọ okporo ígwè netwọk-Bursa-Osmaneli dị ka nzọụkwụ mbụ-Ayazma Fast Train Project nzukọ Bursa-Yenisehir Speed ​​Okporo ígwè Project ...
Ihe omumu okporo ụzọ nke Ankara-Istanbul 25 / 10 / 2012 Dị ka a maara, Fast Train Project, dị n'agbata Ankara-Istanbul akara onwe ha 250 km / h dị ka ọsọ, niile electric, na-agba ama mejupụtara ndị na-ewu nke ọhụrụ abụọ-ọsọ okporo ígwè akara. Taa, akara ugbua dị n'etiti Ankara na Istanbul bụ 576 kilomita, nke niile bụ mgbaàmà na eletriki. Dị ọbụna onwe ha, 250 km / h dị ka ọsọ, sọrọ-akara, ike na mgbaàmà mgbe ẹkụre wuru-Speed ​​Train akara, anya n'etiti abụọ isi obodo, 533 km 'na-na. 10 ọrụ ahụ nwere akụkụ dị iche iche. Pịa ebe a maka ozi ndị ọzọ Isi: 2023 njem
3. Ụgbọ ala ụgbọ elu
Nnukwu ọdụ ụgbọ Beşikta.
Lelee Full Profile nke Ekrem
Ngwurugwu nke ala
Konya na Kayseri Business World Exam BTSO's Brand Projects
Ekpebiri Yearbọchị 2020 Ankarakart
3 ulo oru ulo ohuru maka TCDD
Developments na Turkey Ese Transportation mgbanwe ke Qualifications
Oge Vangolu Express Flight Times na ụgbọ oloko
Enigma n'efu na Başkentray
Ọzụzụ Pụrụ Iche site na EGO ruo ndị ọrụ
6 New Bus Line na Denizli
Unye Asphalt Nkasi Obi
Eskisehir Images Na-achọ Mma N'okporo ụzọ Frankfurt
Channel Istanbul Project Na-amalite 30 August Big Day
Ogo na nkasi obi nke okporo ụzọ meziwanye ya na Stonelọ Nkume Asphalt dị na Kayseri
A na-arụzi okporo ụzọ Yedikuyular na Bertiz
Nkwado nke mba Turkey na Railways
T-Roc Cabriolet ọhụrụ ka a ga-ekpughere maka oge izizi na Frankfurt Motor Show
Airportgbọ ọdụ ụgbọ elu Istanbul na-azọputa nchekwa ego 8
National Express Train si Eskisehir N'ebe ọzọ na-adịghị emepụta na Turkey
Nkwupụta nke Obi ebere: Ọrụ ịkwado okporo ígwè
Mara curezụta Ihe: A ga-azụta ihe maka CCTV Sistem
Mara: curezọ Mweghachi nke okporo ụzọ ọdụ ụgbọ mmiri
Usoro Konya-Karaman High Speed ​​Train Line
İstanbul BB Beşiktaş - Kabataş Tekstilkent - Mahmutbey Rail System Line Metro line ga-nyere 2 ogbo
Beşiktaş - Kabataş Tekstilkent - Agbanyere usoro ntinye okporo ụzọ Method Rail System Line Line Metro na 2
Ọnọdụ ikpeazụ na Ankara-Istanbul High Speed ​​Train Project
ANKARA - İSTANBUL Ọhụụ nke Ọhụụ Dị Elu nke Ọhụrụ
Ọnọdụ nke Rize Teleferik Project nke oge a (Foto Foto)
Ọnọdụ ugbu a na Trabzon ropeway oru ngo
Ọnọdụ nke ugbu a na Bandayrma-Bursa-Ayazma-Osmaneli High Speed ​​Train Project
Ihe omumu okporo ụzọ nke Ankara-Istanbul
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa August 2019 (284) July 2019 (636) June 2019 (503) Mee 2019 (525) April 2019 (418) March 2019 (520) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (619) November 2018 (504) October 2018 (436) September 2018 (518) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (580) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (555) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (541) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (665) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (536) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (770) September 2014 (598) August 2014 (809) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (831) September 2012 (886) August 2012 (976) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)